Burma Strange News (Burmese Version): အမျိုးသားများကို ဝှေးသင်းမည်ဟု အိုက်စလန် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်ပြော
အမျိုးသားများကို ဝှေးသင်းမည်ဟု အိုက်စလန် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်ပြော
ဝှေးသင်းခံရမည် ဟူသော သတင်းကြောင့် အိုင်စလန်ရှိ နိုင်ငံရေးသမား အမျိုးသား အားလုံး ထိတ်လန့်နေကြသည်။
အိုက်စလန် ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာ အမျိုးသမီးကြီး ကျော်ဝဏ္ဏ သိက္ခာဓရ ဒေါ်တီ (Johanna Sigurdardottir)က နိုင်ငံရေးတွင် ‘ဝှေးစေ့ ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်’ (age of testosterone) ကို အဆုံးသတ်ပစ်ဖို့ ကြွေးကြော် လိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများကို ဝှေးသင်းမည်ဟု ကြွေးကြော်ကာ Challange လုပ်လိုက်သော အဆိုပါ မြန်မာ အမျိုးသမီးကြီးကို တကမ္ဘာလုံးက ကြောက်ရွံ့ အံ့သြနေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သူမ၏ ကြွေးကြော်ချက်အတိုင်းသာ အတည်ဖြစ်လာပါက အိုက်စလန်တွင် ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆရာဝန်များ စီးပွားဖြောင့်လာနိုင်ပြီး အိုက်စလန် နိုင်ငံရေး စင်မြင့်တွင် ဖြတ်ဖောက်ချုပ်များကို မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိနေသည်။
အိုက်စလန် ၀န်ကြီးချုပ်အကြောင်း မောက္ခတွင် ဖတ်ရန် ...
Posted by BS News at 12:12 AM
ဝှေးစေ့ ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်.. watatranslation!!! i shall give the translator the Burma All-time Best Translator award..
Anonymous January 24, 2011 at 5:44 AM
လန့်သွားတာပဲ ဘာသာပြန်သူရယ် :))